အမေများအဖွဲ့ကို အလှူငွေများသွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့မြင့်မြတ် - The Moon MM
ပရိသတ်ကြီးရေ.. မြင့်မြတ်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသားတွေထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဂျင်းကောင်ကာရိုက်တာနဲ့ ပရိသတ်တွေကိုဖမ်းစားခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ် ။ မြင့်မြတ်ရဲ့ သဘာဝကျကျပီပြင်တဲ့သရုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေအသည်းစွဲအားပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး (၂၀၁၉) ခုနှစ်အတွက် အကယ်ဒမီဆုကြီးကိုလည်း မြင့်မြတ်အတွက်ပရိသတ်တွေကထင်ကြေးပေးနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် ။
မြင့်မြတ်ကတော့ အလှူအတန်းပြုလုပ်တဲ့ နေရာမှာသဒ္ဒါတရားထက်သန်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးဒီနေ့ မတ်လ (၁၉)ရက်နေ့မှာတော့ “Now. အမေများအဖွဲ့”ဆိုပြီး အမေများအဖွဲ့ကို ကန်တော့ငွေများသွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအလှူလေးကိုတော့ မြင့်မြတ်ရဲ့ မန်နေဂျာဖြစ်သူရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အမေများအဖွဲ့ကို ကန်တော့ငွေများသွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ပုံရပ်လေးတွေကိုတင်ထားတဲ့ ပို့စ်လေးအောင်မှာတော့ ပရိသတ်တွေကသာဓုခေါ်ထားကြပါသေးတယ်။ပရိသတ်ကြီးလည်း အမေများအဖွဲ့ကို လှူငွေနဲ့သွားရောက်ကန်တော့ခဲ့တဲ့ မြင့်မြတ်ရဲ့အလှူအတွက်သာဓုခေါ်ပေးကြပါဦးနော်…။
Source:Myat Wai Tun
ပရိသတ္ႀကီးေရ.. ျမင့္ျမတ္ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ထိပ္တန္းမင္းသားေတြထဲကတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ဂ်င္းေကာင္ကာ႐ိုက္တာနဲ႔ ပရိသတ္ေတြကိုဖမ္းစားခဲ့တဲ့ အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္ပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ျမင့္ျမတ္ရဲ႕ သဘာဝက်က်ပီျပင္တဲ့သ႐ုပ္ေဆာင္မႈေတြေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြအသည္းစြဲအားေပးခဲ့ၾကတာျဖစ္ၿပီး (၂၀၁၉) ခုႏွစ္အတြက္ အကယ္ဒမီဆုႀကီးကိုလည္း ျမင့္ျမတ္အတြက္ပရိသတ္ေတြကထင္ေၾကးေပးေနခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္ ။
ျမင့္ျမတ္ကေတာ့ အလႉအတန္းျပဳလုပ္တဲ့ ေနရာမွာသဒၵါတရားထက္သန္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီးဒီေန႔ မတ္လ (၁၉)ရက္ေန႔မွာေတာ့ “Now. အေမမ်ားအဖြဲ႕”ဆိုၿပီး အေမမ်ားအဖြဲ႕ကို ကန္ေတာ့ေငြမ်ားသြားေရာက္လႉဒါန္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါအလႉေလးကိုေတာ့ ျမင့္ျမတ္ရဲ႕ မန္ေနဂ်ာျဖစ္သူရဲ႕လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ တင္ထားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
အေမမ်ားအဖြဲ႕ကို ကန္ေတာ့ေငြမ်ားသြားေရာက္လႉဒါန္းခဲ့တဲ့ ပုံရပ္ေလးေတြကိုတင္ထားတဲ့ ပို႔စ္ေလးေအာင္မွာေတာ့ ပရိသတ္ေတြကသာဓုေခၚထားၾကပါေသးတယ္။ပရိသတ္ႀကီးလည္း အေမမ်ားအဖြဲ႕ကို လႉေငြနဲ႔သြားေရာက္ကန္ေတာ့ခဲ့တဲ့ ျမင့္ျမတ္ရဲ႕အလႉအတြက္သာဓုေခၚေပးၾကပါဦးေနာ္…။
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ငယ်ဘဝကပုံလေးတွေကို ယခုပုံလေးတွေနဲ့ယှဉ်တွဲပြီးဖော်ပြလိုက်တဲ့ မေမြင့်မိုရ်
PPE ဝတ်စုံ အစုံ(၁၀၀)စာအတွက် အလှူငွေများလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်
မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးမှာ ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေလေးထဲကနေ မိဘတွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ကန်တော့ခဲ့တဲ့ ဇေယျ
အသည်းကွဲဓာတ်ခံရှိသူ မျက်ရည်လည်ရမယ့် မင်းခန့်(Chinese) “ပြန်လိုချင်တယ်” ဆိုတဲ့ သီချင်းသစ်လေး